Ogaden News Agency (ONA) – Saadaalin: Waxaan sugayaa Itoobiya oo leh- Xukunkii degdega ahaa waanu kordhinay! By- Xaaji M/rashiid.
Saadaalin: Waxaan sugayaa Itoobiya oo leh- Xukunkii degdega ahaa waanu kordhinay! By- Xaaji M/rashiid.
Taliska Gar maqaataha ah ee ay horboodayaan kooxda TPLF ee sida maafiyada u carbisan oo waqti dheer faraha dhiig kula soo jiray waxaa ka horyimid Caqabado waawayn oo uu maaro u la’yahay. Waxaan lawada soconaa meesha xaalkoodu marayo oo ah inay dhex fadhiyaan fashil siyaasadeed oo gude iyo dibadba ka haysta iyo sidoo kale mid milatari. Waxaa arinkaa sababay baa la leeyahay iyagoo taladii dalka isku kali yeelay wixii Nafci ahaana jeebabka ku shubtay!. Mudada ay awoodu Gacantooda ku jirtay waxay caadeysteen qudhgooyo, dadkoo lagu hurgufo Xabsiyo wadareedyo iyo Xabaal wadareedyo. Waxaa intaa dheer iyagoo u dhaqmay qaab ka fog dawladnimada oo ah inay dadka Guryaha kala baxaan xaalkuna noqdo, Hebla iyo Hebel ishii aragtaay burur!
Waxaan lawada soconaa in wixii loogu yeedhi jiray itoobiya ay isla bislaatay qowmiyad walibana difaaceeda isu taagtay markay ka fursan wayday. Waxaa kale ood ogtihiin inay wajahayaan Mudaaharaadyo hirar ah oo lagu diidan yahay xukuumad kusheegta, kuwaasoo kasocda Gudaha iyi Dibadaba. Markay arintaasi sanad soo socotay oy qarka usaaranyihiin in cagaha dhulka looga qaado ayay ku dhawaaqeen Marshall law/Xukun deg deg ah oo kadhigan inuuna jiri doonin wax Qawaaniin ah oo shaqeysa inta lagu jiro mudadaas! Waxaa sidaa itoobiya ugu dhamaatay 4 Bilood oo dawlad la’aan ah maxaase xigi kara?
Anigoo dhexda kaga jira qoraalka saadaasha ee maamulka Woyaanaha waxaynu is waydiin karnaa ma laga hayaa wax natijo wanaagsan ah 120 kii Habeen ee lasoo dhaafay maxaase dhexdooda dhacay? Taliska naxariis,laawe ee fadhigiisu Adis ababa yahay waxuu ciidankiisa u fasaxay inay gumaadaan kacdoon wadayaasha. Waxay aaminsanyihiin Hay’daha Xuquuqul Insaanka, Saxaafadda xorta ah, iyo waliba dadka sida hoose iyo sida koraba ula socday talaabooyinka Askarta in si ula kac ah ay u laayeen dadkii kacdoonka iyo Ardadii jaamacadaha intaba. Waxaa kale oo la sheegay in xabsiyadii la gubay isla markaana shacabkii lagu daabulay xabaal wadareedyo. Waxaas oo dhami ma dajinin dadkii ee waxay bilaabeen inay kubiiraan jabhadaha hubaysan ee ka dhiidhiyay wax lagula kacay Bulshadooda.
Mar hadii mudadii ay qabsadeen ay tagtay sadex dalool laba, waxa ay ka dhaxleena yahay inay umadii gacantooda kasii baxdo iyo Dambiyadii oo kusii batay, mafilayo inay 60 Habeen ku keeni karaan waji kale oo la mahadiyo. Waxaa la yidhi Nimbaa lagu habaaray Reerkaagii ha nabad tagin! Markaasuu yidhi xagiisaba uma socdo! Cidii ku farxi iyo cidii ka naxaysaba, Kooxda TPLF xag dawladnimo iyo xag nabadeed toona uma socdaan!.
Ciidamada Woyaanuhu waxay la kulmeen iska caabin xoogan bilihii lasoo dhaafay, waxyna dhaxleen Mooraal jab aan la qiyaasi karin iyo jab Naf iyo Maalba leh, sidaa darteed ayay Jigjiga ugu qabteen waxa loogu yeedhay dhoolatus awoodeed. Ujeedku waa si kor loogu qaado Ciidamada niyadooda oo ku jaah wareeray Dagaalka isdaba jooga ah ee ay kala kulmayaan Qowmiyadaha baraarugay. Waxa aan ku micnayn karo dabaaldagaas ayaa ah, in Saraakiil kusheega woyaanaha iyo Cabdi Ilay ay ku durduurteen dambiyadii ay Soomaalida Ogadenya kagaleen mar haday kusoo aadiyeen waqtiga Abaaraha iyo Gaajada. Kooxda TPLF ayaa gabi ahaamba iska xidhay Albaabkii wada hadalka iyagoo fahansan haday Albaabkaas furaan in Garta laga helayo fadeexadna la kulmayaan!
Gabagabadii kacdoon wadayaashii iyo Jabhadihii hubaysnaa oo dagaalkoodii sii wada darteed, waxaan saadaalinayaa inay ku dhawaaqaan mar labaad- Xukunkii deg dega ahaa waanu kordhinay maadaama uuna jirin Caqli fayow oo wanaag looga bartay.